Ụzọ ndị dị irè na-agbake ehichapụ foto site na Computer na kaadị ebe nchekwa
Olee otú naghachi ehichapụ foto na PC
Olee otú naghachi ehichapụ foto site na Kaadị ebe nchekwa (ma ọ bụ Flash Drive)
Ụfọdụ Atụmatụ Iweghachi ehichapụ foto na-edebe photos mma
Ọ bụghị onye na-adịghị ahụkebe ọnọdụ maka otutu nke anyị ka anyị ejedebe na na na na-na mberede ihichapụ anyị mmasị set nke foto site anyị na kọmputa na kaadị ebe nchekwa; anyị niile mere ya na otu oge ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụ n'ụzọ nkịtị obi na-agbasa ịhụ ndị niile mmasị oge nke ndụ gị na-eripịa n'elu nri n'ihu gị anya na na kwa ruo mgbe ebighị ebi na otu ntabi, na dị nnọọ a click nke a bọtịnụ akpọ 'Nhichapụ'. Mwute, ọ bụghị ya?
Ọfọn, ọ kpọmkwem dị ka e nwere ọtụtụ ụzọ ị ka nwere ike naghachi ndị dị oké ọnụ ahịa foto nke gị. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke a na-ama, anyị na-aga ịkọrọ ihe nzuzo a na gị. Ya mere, bụ'abụ elu!
Part 1 Olee naghachi ehichapụ foto na PC
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ehichapụ foto gị, o yikarịrị ha na e kwagara egweri biini gị na kọmputa. Na, bụrụ na i bupụrụ ihe egweri biini nakwa mgbe ahụ nakwa na e nwere ụzọ naghachi ndị photos, ka anyị na-akọwa ndị a gị na mfe nzọụkwụ.
• egweri biini bụghị bupụrụ ma - Olee otú naghachi-ehichapụ foto site na egweri biini
Ọ bụrụ na ị na mberede ehichapụ foto, tupu ị na-eme ihe ọ bụla, na-aga na desktọpụ gị chọta na akara ngosi maka egweri biini (dị ka hụrụ na oké n'elu aka nri nke a screenshot).
Ozugbo ị chọtara, na-cursor ka egweri biini icon na pịa ya imeghe ya. Ị kwesịrị ị na-ahụ ugbu a na ihe oyiyi ahụ i ehichapụ ebe a na egweri biini nchekwa.
Ugbu a, ma pịa bọtịnụ na-ekwu, 'Weghachi ihe niile' n'elu dị ka e gosiri screenshot iji weghachi niile faịlụ na egweri biini. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachi naanị a akpan akpan set nke foto, mgbe ahụ, i nwere ike ime ihe ziri ezi pịa ndị na photos n'otu n'otu wee pịa na nhọrọ 'Weghachi'.
• egweri biini bupụrụ, mgbe ahụ, na-eji Wondershare Data Recovery ka iṅomi na-agbake
Wụnye Wondershare Iweghachite ngwá ọrụ na mbụ site na ịpị ebe a. Mgbe ahụ ẹkedori software na họrọ nhọrọ nke 'Echefuola File Iweghachite' na-amalite.
Ugbu a na-esote na ihuenyo kwesịrị igosipụta niile gị na kọmputa draịva. Họrọ onye ahụ i ehichapụ faịlụ site na pịa bọtịnụ 'Malite'.
Wondershare Iweghachite Ngwá Ọrụ ugbu a ga na-amalite ịgụ isiokwu mbanye na sekọnd ole na ole na-egosipụta na ya pụta gị.
Na-esonụ na ihuenyo na-arụpụta egosipụta maka previu, ndabara niile faịlụ na-ahọrọ maka ị na-ama. Deselect ndị ị na-achọghị iji naghachi na pịa bọtịnụ 'Naghachi' na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Part 2 Olee naghachi ehichapụ foto site na Kaadị ebe nchekwa (ma ọ bụ Flash Drive) - na-eji Wondershare Photo mgbake na-azụ na-ehichapụ photos
Wondershare Photo Recovery Bụ Wezuga ọma Deere software na dị mfe iji na nwere interface nke ga-ekwe ka ị na-agbake ehichapụ photos nnọọ ole na ole clicks.
Pịa ebe a iji budata ma wụnye Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị. Ẹkedori software na hụ na gị na Flash Drive jikọọ na kọmputa gị site na-ahọpụta onye ọ bụla n'ime ndị 4 ụzọ dị ka e n'okpuru ke screenshot. Wee pịa bọtịnụ 'Malite'.
Họrọ mbanye na nke data e odude tupu ị kwụsịrị ya wee pịa on 'iṅomi'.
Ozugbo scanning a mere, ị kwesịrị ị na-ahụ na ihe ngosi na oyiyi nile depụtara na i nwere ike naghachi. Họrọ ndị i kwesịrị site marking igbe n'ihu ha na mgbe ahụ kụrụ 'Naghachi'.
Ugbu a, ị ga-enweta ihe nhọrọ na họrọ ụzọ ebe ị ga-amasị Natara oyiyi ga-azọpụta. Jide n'aka na ị họrọ ọnọdụ ọzọ na abụghị otu mbanye site na nke ị tụfuru ihe oyiyi na akpa ebe na iti 'Naghachi' ọzọ.
Nkebi nke 3 ụfọdụ Atụmatụ Iweghachi ehichapụ foto na-edebe photos mma
Ọ bụrụ na ị ehichapụ photos mmadụ na mberede mgbe ahụ ị ga-ozugbo kwụsị ọ bụla n'ihu mmebi site n'ịnọgide na-ịzọpụta ọ bụla ọhụrụ faịlụ na otu mbanye.
Ka Wondershare Photo Recovery ike iṅomi zuru ezu n'ụzọ zuru ezu tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ n'ihi na mma na ya pụta.
Jiri nhọrọ nke 'Save iṅomi' ịzọpụta gị Doppler results na-eji ha maka na-aga n'ihu foto mgbake mgbe ọ bụla ị chọrọ, na-enweghị rescan.
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, na-gị photos mma site akwado ha n'ebe ọzọ mbanye ma ọ bụ ihe na-elekọta n'ihu gị ihichapụ ha.
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ na Windows na Mac
3 Ụzọ naghachi ehichapụ nchekwa
Top 5 SD kaadị mgbake software
CF Kaadị Format Error? Edozi! - Naghachi data si CF Kaadị Error
Kaadị ebe nchekwa Iweghachite naghachi Files maka Windows & Mac
Olee otú naghachi data na ndozi mebiri emebi Micro SD kaadị
Olee otú ime a online SD kaadị mgbake
ụzọ na-agbake data si a emerụ kaadị ebe nchekwa
Kingmax Kaadị ebe nchekwa Iweghachite Tutorial
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si kaadị ebe nchekwa gị
Mee kaadị ekele na Mac iji iPhoto Kaadị Nrụpụta
Xd Kaadị Iweghachite naghachi Lost Data si xd Kaadị
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Bara Uru ụzọ naghachi ehichapụ foto site na Computer na kaadị ebe nchekwa